Kaleessa Gujii Aanaa Gumii Eldallootti humnootni naga kabachiistota mootummaa cidharratti dhukaasa bananii nama tokko ajjeesanii sadii kaan madeeessuu jiraattonni dubbatan.
Godina Gujii Bahaa Aanaa Gumii eldalloo ganda bulbul jedhamutti kaleessa humni naga kabachiiftota mootummaa cidha jiraattonni naannoo irratti hirmaataa turan takka irratti dhukaasa bananii namni tokko du’uu kaan madaawuu jiraattonni Sagalee Ameerikaaf himanii jiru.
Jiraataan aanichaa maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan takka humnootni kun dhufanii akka itti balaa geessisan akkasitti ibsan.
Jiraattonni Ganda bulbul sagalee Ameerikaaf dubbatan tarkaanfii ajjeechaa kana kan fudhate miseensota Raayya Ittisa biyyaa fi poolisii Oromiyaati jechuun dubbatu. Dr. Mesfin Meedikaal Daayrekteriin Hospitaala Nageellees namootni miidhaan irra dhaqqabe sadii yaalaaf gara Hospitaala nageellee dhufuu mirkaneessan. Dr. Mesfin namootni sadeenuu rasaasaan rukutamuu himanii isaan keessaa tokkorra miidhaa cimaan waan dhaqqabeef gara Hospitaala hawaasaatti erginee jedhan.
Waan ajjeechaa humnoota naga kabachiiftota mootummaan fudhatame jedhame kan bulchiinsa aanichaa gaafannee turre. Obbo iyyaa Huseen bulchaan aanichaa namni tokko ajjeefamuu mirkaneessanii jiran.
Obbo Iyyaan humni nageenyaa naannoo sanatti tarkaanfii ka fudhataa jiru rakkoo nageenyaa aanicha mudatee jiruuf furmaata barbaaduufi jechaan himanii, yeroo cidhaa kana miseensonni hidhattoota naannoo keessa socho’anii cisha kana keessa akka turan shakkiin jiraa jechaan dubbatan. Qoannoon ajjeechaa kanaas jaarrolee fi qaamolee seeraan akka raawwatamuu dubbatanii, dhiyeenyatti sabaaf ifatti akka beeksisan dubbatan.